एक नम्बर प्रदेशमा माओवादी पहिलो हुन्छ : सुरेश राई (हिमाल) – गाउँपालिका
एक नम्बर प्रदेशमा माओवादी पहिलो हुन्छ : सुरेश राई (हिमाल)
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ १०, २०७४ समय: ११:१४:५५
माओवादी केन्द्रका एक नम्बर प्रदेश निर्वाचन प्रचारप्रसार संयोजक सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’
चीन र भारतलाई जोड्ने आर्थिक केन्द्रदेखि पर्यटन, कृषि लगायतले भरिपूर्ण प्रदेश नम्बर एक राजनीतिले भने अपूर्ण छ । लिम्बुवानले पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रान्त माग गरेर पटक–पटक आमहड्ताल गरिरहन्छ । कोचिलाको तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला स्वायत्त राज्य बनाइनुपर्ने माग छ । जनताका आर्थिक समृद्धिका सपना पुरा गर्ने र फरक–फरक पहिचानलाई मिलाएर लैजाने स्थानीय स्तरमा नयाँ नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने चासोका बीच चुनावको अघिल्लो दिन पैसा दिएर भोट किन्ने ठाउँका रुपमा पनि प्रदेश नम्बर एकलाई धेरैले हेरेका छन् । वास्तविकता के हो ? भन्ने बिषयमा माओवादी केन्द्रका एक नम्बर प्रदेश निर्वाचन प्रचारप्रसार संयोजक सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’ संग लिएको अन्तर्वार्ताः
कतै कांग्रेस कतै संघिय समाजवादीसंग तालमेल गरेर चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता कि आवश्यक्ता ?
दुबै हो । ‘यहाँ यहि १२ र १३ गते करोडौँ रकम बाडिँदैछ, हामी रोक्न खोज्दैछौँ ’ एक नम्बर प्रदेशका ६० देखि ७० तहमा चुनावको अघिल्लो दिन पैसा बाँड्ने सबै सेटिङ् मिलाईएका छन् । पैसाले भोट किन्ने ठाउँ भएकाले पनि तालमेल गरेर तिनलाई परास्त गर्ने नीति लिइएको हो । जाँड र मासु खुवाएर भोट माग्ने काम भैरहेका छन् । यस्ता अलोकतान्त्रिक चरित र चुनावी प्रतिस्प्रधा तोड्न नै तालमेल गर्नुपर्यो ।
भनेपछि माओवादी पहिले भन्दा पनि खस्किने देखियो एक नम्बर प्रदेशमा !
हामीले ५० देखि ५५ स्थानीय तहमा जित्ने आंकलन गरेका छौँ । १३७ तह मध्य कम्तिमा १३७ वडा हाम्रो पक्षमा आउँछ । लिम्बुवानका पाँच जिल्लामा १५ देखि १७ तहमा हाम्रो दावी छ । किँरातका ५३ वडा मध्य २५ वटामा हामी जित्छौँ । ६० देखि ७० तहमा कांग्रेस,एमाले र माओवादीको कडा प्रतिस्प्रधा हुने देखिएको छ । ति तहमा पैसा बाँडिदैछ भनेको हुँ । हामी खस्कन्छौँ भन्ने होईन एक नम्बर प्रदेशमा माओवादी पहिलो हुन्छ ।
२०६४ सालको पहिलो पहिलो संविधानसभाको चुनाव जस्तै ?
त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेका स्थानीय संगठन भत्किएका थिए । अहिले उनीहरुका संगठन पनि राम्रो छ । हाम्रो त छँदैछ । यसर्थ कडा प्रतिस्प्रधा हुनु स्वभाविक हो । २०७० को दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भन्दा चाहीँ राम्रो हुने आंकलन छ ।
चुनाव जितेपछि एक नम्बर प्रदेशलाई कस्तो बनाउने हो ?
समृद्ध बनाउने । हामीले ५ बर्षे कार्ययोजना बनाएका छौँ । जिल्ला तहले पनि बनाएका छन् । यहाँ विकासका प्रचुर संभावना छन् ।
चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र वर्षैभरि सञ्चालन गर्न सकिने विराटनगरदेखि किमाथाङ्का सडक बनाउनुछ । विराटनगर औद्योगिक करिडोरको कुरा छ । विकासको सम्भावना बोकेको स्थल हो, ताप्लेजुङको पाथीभरा । सगरमाथा पनि १ नम्बर प्रदेशमै पर्छ । कञ्चनजङ्गा हिमाल पनि एक नम्बर प्रदेशकै सम्पत्ति हो । काँकडभिट्टा भन्सार र विराटनगरको रानी भन्सार भन्सार तेस्रो मुलुकसँग सम्पर्क गर्ने नाका हुन् । यि सबै संभावना र अवशरको सदुपयोग गर्दै देशकै आर्थिक रुपमा समृद्ध प्रदेश बनाउने हाम्रा एजेण्डा हुन ।
चुनावमा तपाईँहरुमात्र हुनुहुन्न । के छ अन्य दलहरुको अवस्था ?
आर्थिक विकासका एजेण्डामा भने अन्य दलहरुको पनि हाम्रो जस्तै प्रतिवद्धता छ । अब यसअघि के भयो भन्नेमा जनता सचेत नै छन् । तै पनि चुनावमा तीन ठुला दलहरुको कडा प्रतिस्प्रधा हुने प्रदेशको रुपमा लिएको छु । जनताहरु अहिले खेतबारीमा छन् । धान रोपाईँ र कोदो रोपाईँको बेला छ । तर पनि १४ गते भोट हालेर मात्रै काममा जाने भन्ने अधिकांसको मुखबाट सुन्दा यहाँको माहोल उभार देखिन्छ ।